कसरी शीर्षक लेख्ने
कसरी एक शीर्षक लेख्ने जसले आगन्तुकलाई व्यस्त बनाउँछ
शनिबार, मे 7, 2016 शनिबार, फेब्रुअरी ०१, २०२० Douglas Karr
प्रकाशनहरू जहिले तिनीहरूको हेडलाइटहरू र शीर्षकहरू शक्तिशाली इमेजरी वा स्पष्टीकरणको साथ लपेटेर फाइदा लिन सक्छन्। डिजिटल क्षेत्रमा, ती विलासिताहरू प्रायः अवस्थित हुँदैनन्। सबैको सामग्री ट्वीट वा खोज इञ्जिन परिणाममा धेरै समान देखिन्छ। हामीले व्यस्त पाठकहरूको ध्यान हाम्रो प्रतिस्पर्धीहरू भन्दा राम्रोसँग लिनुपर्दछ जसले गर्दा उनीहरू क्लिक-थ्रु र उनीहरूले खोजिरहेका सामग्री प्राप्त गर्न सक्छन्।
औसतमा, पाँच गुणा धेरै व्यक्तिहरूले मुख्य प्रतिलिपि पढेर हेडलाईन पढ्दछन्। जब तपाईले तपाईको हेडलाईन लेख्नुहुन्छ, तपाईले आफ्नो डलरबाट c० सेन्ट खर्च गर्नुभयो।
डेभिड ओगिलवी, एक विज्ञापन मानिस को कन्फेशेसन
नोट गर्नुहोस् मैले भनेको छैन कसरी क्लिकबाइट लेख्न, वा कसरी क्लिक गर्ने पाठकहरू। प्रत्येक पटक जब तपाइँ त्यो गर्नुहुन्छ, तपाइँ तपाइँको पाठकको हार्ड-अर्जित विश्वास हराउनुहुन्छ। र विश्वास भनेको प्रत्येक बजारको इच्छा हो जुन उनीहरूको अर्को पाठकसँग व्यापार गर्न चाहन्छ। यो किन प्राय: क्लिकबाइट साइटहरूले विज्ञापन स्थानबाहेक केहि बेचेको छैन। उनीहरूलाई उनीहरूको विज्ञापन दरहरू वृद्धि गर्न संख्याहरू चाहिन्छ, ती आगन्तुकहरूको विश्वास होइन।
सेल्सफोर्स क्यानाडाले एक इन्फोग्राफिक सँगै राखेको छ, ध्यान दिनुहोस् कि शक्तिशाली शीर्षकहरू कसरी लेख्ने। यसमा तिनीहरू निम्न विधिविधिको प्रयोग गर्न बोल्छन्।
राम्रो शीर्षक लेख्ने शाईन विधि
S - हुन विशिष्ट शीर्षकको बारेमा जुन तपाईं लेखिरहनु भएको छ।
H - हुन सहयोगी। तपाइँको दर्शकलाई मूल्य प्रदान गर्नाले अधिकारीको रूपमा तपाइँमा तिनीहरूको विश्वास र विश्वास बढ्छ।
I - हुन चाँडै चाखलाग्दो। जेनेरिक किवर्ड भरिएका शीर्षकहरूले यसलाई काट्दैन।
N - हुन खबरमात्र। यदि अरू कसैले राम्रो लेख लेखेको छ भने, यो साझा र आफ्नो समय बचत गर्नुहोस्!
E - हुन रमाइलो। मार्केटिंग बोल्ने र ईन्डस्ट्री लिंगो तपाईंको श्रोतालाई निद्रामा पार्छ।
इन्फोग्राफिक सिफारिश गर्दछ CoSchedule को ब्लग पोस्ट हेडलाइन विश्लेषक, जसले मलाई हेडलाइनमा B + प्रदान गर्यो। यो स्कोर उच्च को कारण थियो कसरी तत्व। समग्र स्कोर तिनीहरूको मा आधारित छ भावनात्मक मार्केटिंग मूल्य एल्गोरिथ्म जसले शब्दावलीको आधारमा हेडलाइन साझा गर्ने राम्रोसँग भविष्यवाणी गर्दछ।
एउटा सरल ट्रिक जुन महान् प्रतिलिपि लेखकहरूले मलाई देखाउँछन् कि काम गर्दछ कि कसरी तपाईंको शीर्षकलाई तपाइँ वा तपाइँको वरिपरि लपेट्ने ताकि तपाइँ पाठकसँग सीधा कुरा गर्न बाध्य हुनुभयो। तपाईंको पाठकसँग सिधा कुरा गर्दा अनुभव निजीकृत हुन्छ र तपाईं र तपाईंको पाठक बीच एक द्रुत कनेक्शन बनाउँदछ, तपाईंको पाठकहरूलाई बाँकी पढ्नको लागि क्लिक-थ्रु गर्न प्रोत्साहित गर्दछ।
टैग: दर-क्लिक दरclickbaitमंगनीरमाइलोशीर्षकहरूसहयोगीकसरीकसरी शीर्षक लेख्नकसरी शीर्षकहरू लेख्नेइंफोग्राफ़करोचकखबरमात्रबिक्री बलबिक्री बल क्यानाडाखोज ईन्जिन परिणाम पृष्ठserpचम्कनेविशिष्टशीर्षकहरूशीर्षकहरू लेख्दैशीर्षक लेखन
NFC बुझ्दै: नजिक क्षेत्र संचार
DorisLaffey (@ LafeyDoris)
जुलाई,, २०१ at 11::2016। बिहान
महान सिफारिशहरू, डगलस! तिमीलाई थाहा छ? म त्यस्ता उपकरणहरू जस्तै हबस्पट टोपिक जेनरेटर वा ब्लगअबाउट द्वारा ब्लग शीर्षक जेनरेटर पनि प्रयोग गर्दछु - उनीहरूले मलाई सामान्य हेडलाइन प्याराफ्रेज गर्न मद्दत गर्दछन् जसले पाठकहरूको ध्यान आकर्षित गर्दछ। तपाईं मेरो ब्लगमा यी उपकरणहरू द्वारा उत्पन्न केही शीर्षकहरूका उदाहरणहरू देख्न सक्नुहुनेछ http://www.edugeeksclub.com/blog .
खैर, मैले हेडलाइन विश्लेषकको बारेमा सुनेन - म निश्चित रूपमा भविष्यमा प्रयोग गर्नेछु।